Montebel chisel paCICEE2021
ne admin pane 21-05-20
Montebel mhando yepamusoro yemabhureki chisiki kubva kuMontono show paCICEE2021 (2021 Changsha International Construction Equipment Exhibition) muChangsha kubva 5.19-22. Montebel yakasarudzika super inopfeka-isingadziviriri chisel inogadzirwa neyega-yakagadzirirwa TSG46A zvinhu. Hupenyu hwebasa rechisi hunodarika 42Crmo 50 ...
Chikamu chemusika cheRockbreaker Systems chinotarisirwa kukura kubva muna 2021 kusvika muna 2024 chakawedzera zvakanyanya | Munyori: Delta Injiniya, Rock-Tech, Astec Australia, Wuxi Golink michina yekuvaka, McQu ...
Sekureva kweshumo nyowani yakaburitswa neReports Monitor, zita iri "Rockbreaker System Market: Global Opportunity Analysis uye Indasitiri Forecast kubva 2021 kusvika 2027." Musika uyu unokosheswa pamamiriyoni eXx emadhora ekuAmerica muna 2019 uye unotarisirwa kusvika xx na2019 Mamiriyoni emadhora ekuAmerica. B ...
Atlas Copco MB 1500 yakawedzerwa kumutsara wekugadzira wepakati-saizi mabhureki: CEG
Iyo MB 1500 hydraulic breaker yekubatanidza yeAtlasas Copco Construction Zvishandiso Co, Ltd. yakagadzirirwa ine zvishoma zvinofamba zvikamu uye ine yakavimbika kwazvo kuvimbika. Iyo yakanaka yekukatanura, mugwagwa mainjiniya, kunodzvora uye yechipiri dombo kupwanya. Iyo nyowani unit inosanganiswa nemana aripo mamodheru kuti compl ...
Chinese Wholesale China Excavator Attachment Zvikamu Furukawa F35 Hb20g Hydraulic Jack Hammer Rock Concrete Breaker
EVOQUIP yazivisa kugadzwa kweFJS Plant Repairs Ltd semvumo yekuparadzira muIreland. FJSPlant ichapa yakazara seti yeEvoQuip michina, kusanganisira compact kupwanya, kuongorora uye zvekufambisa michina; chepakutanga kupembedza zvikamu; uye kugadzirisa kwemuchina, pese pese cou ...
Crusher System Musika Maitiro, Mikana uye Maindasitiri Kufembera 2021-2027 | Dunhu Breaker Technologies (BTI), Osborne, Tramack, Delta Injiniya
ne admin pane 21-01-15
Los Angeles, USA: QY Tsvagurudzo yakaratidza kuti Rockbreaker Systems 'musika wepasi rose unotarisirwa kuwedzera pamwero unotyisa mumakore mashoma anotevera. Chirevo ichi chakanzi "Global Rockbreaker System Market Insights uye Forecast kusvika 2027," uye inopa ongororo yakazara ye mar ...
Sando yakaisa excavator mashandiro akasiyana siyana achishandisa
ne admin pane 20-12-16
1, yekuvhiya yekushandisa tekinoroji Kutanga kusimbisa mamiriro akapoterera iyo. Rotary mashandiro, kutenderedza zvipingamupinyi, nzvimbo yekuita kuziva zvibodzwa, kushanda kwakachengeteka; kushanda, kusimbisa iyo yekumberi-uye-aft nzira yekutungamira, kudzivirira kudonha kana kukanganisa; edza kusapa yekupedzisira drive pamberi pe ...
Hydraulic breaker uye nyundo yedombo inoshanda nemazvo
1. Simba rakakodzera rekuputsika Kwekupwanya zvinobudirira, iyo hydraulic breaker inoshandisa iyo yakakodzera kuputsa simba. Kana iyo yekuparadza simba isingakwani, saka simba repiston sando harizove giraidhi inoshanda. Nenzira iyi, iyo yekumanikidza simba renyundo simba ichaendeswa kune dombo brea ...
hydraulic mudariki kugadzira
Ose maawa masere ekushanda kana kamwe chete pazuva, kuongorora kwekumisikidza kunodiwa. Zvinhu zvekuongorora zvinosanganisira: • zvakasununguka mabhaudhi, kudonha kwemafuta, zvikamu zvakakanganisika, zvikamu zvakaremara uye zvikamu zvakasakara • tarisa mamiriro akazara emidziyo yebasa. Zunza nhengo yega yega. mamiriro eiyo hydraulic system • tarisa b ...
hydraulic breaker vagadziri vanogovana mashandisiro eiyo hydraulic sando mudiki diki
Iyo diki yekutsvaira uye hydraulic sando inosanganiswa kuzadzisa chinangwa chemuchina-wechinangwa muchina. Pfungwa huru ndeye kushandisa iyo hydraulic system yeiyo diki inozvimisikidza pachayo kugadzirisa iyo nyundo (inosanganisira kukwirira kugadziridza uye Angle kugadzirisa), uye panguva imwechete kuwedzera ...
Nitrogen kuchaja chiziviso
Nei uchiwedzera nitrogen? Nitrogen mune inopwanya sando INOSHANDISA iyo hydraulic yekupwanya sando kuchengetedza simba rasara uye simba rekudzoreredza repiston panguva yekuramwa kwakapfuura, uye inoburitsa simba panguva imwechete panguva yekuramwa kwechipiri kuwedzera kugona kwekurova. Muchidimbu, iyo ef ...
Kushandiswa kwe hydraulic breaker chisel
hydraulic breaker chisel yakabatana iyo bit uye yekuchera michina, yangu mainjiniya kushandiswa kwechisel kune hexagonal hollow simbi uye mhango simbi, hexagonal hollow simbi yekucheka mukati mebindu re22 mm uye 25 mm dhayamita, kunze dhayamita yemhango gadheni simbi uye 38 mm kusvika 32 mm ...